Archive du 17-janv-2022
Christine Razanamahasoa Efa manao firesaka mpanohitra ?
Raha nilaza Rtoa Christine Razanamahasoa Filohan’ny Antenimierampirenena tany aloha, fa mihazakazaka ny fampandrosoana, ary tena manao “Vitesse TGV”,
Fonjaben’i Morondava Voasambotra ireo gadra 7 saika handositra
Nafampana ny toe-draharaha tao Morondava ny sabotsy teo. Gadra 7 lahy no nikasa hitsoaka ny fonja ny androtr’io sabotsy 15 janoary teo tokoany 10 ora sy 45 minitra atoandro.
RN44-Taksibrosy tra-doza Mpandeha 3 indray namoy ny ainy
Fiara taksiborosy marika Sprinter mitondra ny laharana 9507 AH, zotra rejionaly mampitohy an'Ambatondrazaka sy Amparafaravola no niharan-doza teo Andilapotsy, 5 Km miala an'Ambatondrazaka omaly alahady 16 janoary 2022
Ady amin’ny coronavirus Miala any ny vaksiny “fatra fahatelo”
Nangataka ny hevitry ny Akademiam-pirenen’ny mpitsabo eto Madagasikara (ANAMEM) ny minisiteran’ny fahasalamana manoloana ny fanontaniana mipetraka ny amin’ny tokony hanaovana vaksiny fanampiny na « dose de rappel » hiadiana amin’ny coronavirus.
Tapa-bolana voalohan’ny 2022 106 matin’ny coronavirus, 3393 ny tranga
Niakatra ny isa sy ny antontan’isan’ireo olona voamarina fa tratry ny valanaretina coronavirus ny 08 ka hatramin'ny 14 janoary 2022.
FJKM miatrika ny taona 2022 “Mitrakà, miovà, mivavaha, miasà”
Tontosa tetsy amin’ny Coliseum Antsonjombe omaly ny fanompoam-pivavahana fanokafana ny taom-piasana 2022 ho an’ny Fiangonana FJKM ;
Siteny sy ny mpanao rugby Manomboka mifanao pi-maso
Tontosa ny sabotsy ny teo tetsy amin’ny ANS Ampefiloha ny fifampiarahabana tratry ny taonan’ny FTMRF6 na fikambanan’ny tanora mpanao rugby ato amin’ny faritra miisa 6, tarihin-dRakotondrafara Jean Heriniaina na Naina be.
Antenimierandoholona Nodimandry ny loholona Eongobelo Jean Marcel
Nodimandry omaly alahady 16 janoary 2022 ny loholon'i Madagasikara lany tao amin'ny Faritanin'i Toliara, Andriamatoa EONGOBELO Jean Marcel.
Disadisa ara-bola tamina vahiny Maty voatsatoka antsy i Junnot UEM
Mpitarika ny UEM Maty nisy namono noho ny disadisa nisy taminy sy tamin'ny teratany vahiny iray izay nananany trosa i Junnot Ramananarivo, zanaky ny faritanin'i Mahajanga, tanora isany manam-pahaizana ary Sekretera